MACLUUMAADKA TARANKA CHEGLE DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Chihuahua / Beagle eeyo isku dhafan oo isku dhafan
Waxaan nasiib wanaag u leenahay inaan Eygan ka soo korinno goob badbaadin oo ay ku qiyaaseyso hal sano jir sawirkan. Magaceedu waa Gidget oo lagu sharfayo eeyga horay u soo maray xayaysiinta Taco Bell. Waxay qiyaastii tahay 12 rodol oo waxay soo bandhigeysaa qaar ka mid ah astaamaha caadiga ah ee Chihuahua — boodboodka, tamar badan, cabsi la'aan, dhaqso u sheegidda. Waxay sidoo kale leedahay astaamo caan ah oo ah gorgor-sanka dhulka socda iyo orodka, rabitaanka cuntada oo wanaagsan, napper heer caalami ah. Wanaagsan carruurta oo jecel jeesashada. '
Cheagle ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Gorgor . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Riley the Cheagle (Chihuahua / Beagle mix) qiyaastii 2 sano jir— 'Riley waxay jeceshahay inay si buuxda kuu salaaxdo hoosta bustayaal . Wuxuu maraa 4 lugood maalintii. Isagu waa qof bulsheed oo saaxiibtinimo leh mararka qaarkoodna wuu ciyi doonaa ilaa aad kaxaysato . Riley waa qof aad u daacad ah oo caqli badan. Wuxuu noqon karaa xishood iyo bisad cabsi badan. Wuxuu ahaa mid aad u fudud tababbarka wuuna ahaa dheriga loo tababaray hal toddobaad gudihiis.
Riley the Cheagle (Chihuahua / Beagle mix) oo qiyaastii 2 sano jir ah oo gaariga la saaran dadkiisa
Riley the Cheagle (Chihuahua / Beagle mix) qiyaastii 2 sano jir ayuu xirnaa jaakad maalin qabow
'Attalyn, Cheagle-kayga yar ee 10 bilood jira, culeyskiisuna yahay 16 rodol. Waxaan ugu yeeraa Atty gaabin. Waxay leedahay jilif xoog leh, laakiin marar dhif ah ayay ku qaylisaa qof kasta (xayawaan tababbaran) iyadu si ka badan 'bays'. Waxay jeceshahay inay ku nasato sariirta iyo daawashada TV-ga iyo ku rogrogmada doogga markay qoraxdu jirto. Waxay jeceshahay inay tagto socod gaaban laakiin taayirro 1mile gudahood ah! Waxay jeceshahay la ciyaarista carruurta, dadka iyo eeyo kale (laakiin kaliya eeyaha waaweyn). '
Attalyn Cheagle (Chihuahua / Beagle mix)
Attalyn Cheagle oo ah eey (Chihuahua / Beagle mix)
'Kani waa Olivia, isku darka Beagle / Chihuahua. Waxay tahay 8 inji iyo 9 rodol. Waxay leedahay timo gaagaaban oo leh dhibco cad iyo midab. Waxay leedahay indho Chihuahua, dhagaha Chihuahua hoos u dhig, qaniinyo ka badan, bushimaheeda hoose waa kuwo dhalaalaya, jidhkeeda iyo wejigeeduba waa sida Bahalka oo kale oo ay weheliyaan dhibicyadeeda maqaarka. Iyadu waa jilicsan oo la jecel yahay. Waxay kaliya la ciyaaraysaa ruff iyada dada, ninkeyga. Ciddiyaheedu si dhakhso leh ayey u koraan. Naanaystayaasheeda ayaa ah Olila, Pochonga, pochungita, cochita iyo Olive. Waxyaabaha ay ku ciyaaraan ee ay jeceshahay ayaa ah toy-da ay ku ciyaareyso, taleefanka gacanta iyo kubbadeeda kubbadeed ee casaanka ah iyo wax kasta oo jaalle ah Waxay jeceshahay dadaheeda, ninkeyga. Waxay jeceshahay inay kubbadda ciyaarto, wax badan ayey oroddaa, waxayna jeceshahay inay ku boodo meel kasta, sariirta ilaa sagxadda, sagxadda ilaa sariirta, meel kasta. Way ku weyn tahay carruurta.
Sissy (Chihuahua / Beagle ey isku dhafan)
Liiska eeyaha ee Chihuahua
sawirada eeyaha buluugga ah ee buluugga ah
sawirada eyda gaaban ee jarmalka
chihuahua oo lagu qasay eyga wiener
iskudhafka eyga buur bernese mix